Venezuela: Rabshado Ka Dhacay Caasimada Iyo Inqilaab Fashilay? |
Venezuela: Rabshado Ka Dhacay Caasimada Iyo Inqilaab Fashilay?
Xukuumada Venezuela ayaa sheegtay in kooxda Mucaaridka ah isku dayeen Salaasadii Inqilaab militari balse ay fashiliyeen.
Madaxweyne Nicolas Maduro ayaa sheegay in uu weli heysto taageerada buuxda ee militariga dalkaasi, maalin kadib markii Hogaamiyaha Mucaaridka Juan Guaido oo isagu horey u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha KMG-ka uu ku baaqay kacdoon ay xukunka kula wareegaan.
Juan Guaido ayaa Salaasadii shalay muuqaal uu ku faafiyey bartiisa twitter ugu baaqay shacabka inay isugu soo baxaan wadooyinka magaalada Caracas ee caasimada dalkaasi, wuxuuna sheegay inuu ku sugan yahay Saldhiga militari ee ku yaal magaalada uuna heysto taageerada militariga isagoo sheegay inay galayaan hawlgalkii ugu danbeeyey oo xukunka looga tuuri lahaa Madaxweyne Nicolas Maduro.
Baaqan hogaamiyaha mucaaridka ayaa keenay in wadooyinka magaalada Caracas ay isugu soo baxan taageerayaasha labada dhinac, waxaana jira iska horimaadyo hubeysan oo ka dhacay gudaha magaalada oo dhexmaray koox hubeysan iyo ciidamada daacada u ah dowlada oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 70 qof.
Mucaaridka ayaa sheegay in maanta oo Arbaca ah ay qaban doonaan banaanbixii ugu weynaa ee taariikhda dalkaasi.
Wasiirka Gaashaandhiga ee Venezuela Vladimir Padrino ayaa sheegay in rabshadihii shalay ka dhacay caasimada uu ahaa Inqilaab fashilay.
Madaxweyne Maduro oo xalay kasoo muuqday telefishinka dowlada ayaa sheegay inay fashiliyeen inqilaab uu soo abaabulay Maraykanka.
Kooxda mucaaridka oo iyagu horey looga guuleystay doorashooyinkii dalkaasi ka dhacday 2018 ayaa taageero ka helaya Maraykanka oo doonaya in xukunka laga tuuro xukuumada Nicolas Maduro oo u jeen jeerta dhinaca bidix, Maraykanka ayaa sidoo kale daneenaya batroolka uu dalkaasi qaniga ku yahay.
Xukuumada Maduro ayaa iyaduna taageero ka helaysa Ruushka, Shiinaha iyo Cuba oo la sheegay inay ciidamo geeyeen dalkaasi arrintaasi oo ay cambaareysay xukuumada Maraykanka ee Trump oo ku goodineysay inay Maduro ka qaadi doonto tilaabo militari.